Qalbi-dhagax oo soo gaaray Muqdisho lana kulmay RW Rooble | KEYDMEDIA ENGLISH
Qalbi-dhagax oo soo gaaray Muqdisho lana kulmay RW Rooble
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa galabta kulan la yeeshay Cabdikariin Muuse Qalbi-dhagax, kaas oo sanadkii 2017-kii loo dhiibay Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdikariin Muuse Qalbi-dhagax, oo ah muwaadin Soomaaliyeed kana tirsanaa Ururka gobonimo doonka ee ONLF, ayaa isagoo xor ah soo gaaray Muqdisho, oo ah halkii laga dhoofiyey isagoo indhaha iyo gacmaha ka xiran.
Dowladda Farmaajo ayaa Qalbi-dhagax sanadkii 2017-kii u gacan gelisay gumeystaha Itoobiya, waxaana Xukuumadii Kheyre ee xilligaasi jirtay ay ururka ONLF u aqoonsatay mid argagixiso ah.
Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa galabta xafiiskiisa ku qaabilay Qalbi-dhagax, wuxuuna ka raalli geliyey dhibaatadii loo geystay, iyadoo lagu soo dhuumanayo shaarka dowladnimada.
Cabdikariin Muuse ayaa dhankiisa la mahad celiyey garawshiyaha Rooble, kaas oo ay Xukuumadiisa ka laabatay go'aankii ONLF, looga dhigay urur argagixiso ah.
Imaanshaha Muqdisho ee Qalbi-Dhagax ayaa ku soo beegmaya, xilli uu dalka u diyaar garoobayo doorashada xilka ugu sareeya dalka, waxaana shacabka Soomaaliyeed fajac la ah, in dadkii dhiibay Qalbi-dhagax ay doonayaan in mar kale dib loo doorto.
Billowgii September 2017, Xukuumaddii Kheyre, ayaa sheegtay in Qalbi Dhagax uu ahaa shakhsi ku howllanaa falal liddi ku ah ammaanka Soomaaliya iyo Itoobiya isla-markaana uu gacan saar la lahaa kooxda Al-Shabaab, hayeeshee, ma jirin caddeymo buuxa oo ay keentay.
Bishii Agoosto 2021, Rooble, ayaa magaalada Nairobi kula kulmay, Guddoomiyaha Ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh [Maadeey ] iyo Cabdikariin Muuse Qalbi-dhagax, wuxuuna xilligaas Ra’iisul Wasaaruhu ka raalli-galiyay gobood-falka lagula kacay.
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya [oo loo soo gaabiyo ONLF], waa Jabhad ku dhisan dhaq-dhaqaaq bulsho iyo mid siyaasadeed, taas oo la aas aasay 1984-kii, si ay ugu ololayso aayo ka tashiga Soomaalida ku nool deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Qalbi-dhagax, wuxuu ka mid ahaa askartii Soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay dagaalkii 1977-kii uu dalku la galay Itoobiya, hayeeshee, ugu danbeyn Dowladda Soomaaliya ayaa u gacan galisay waddankii uu muddada dheer dagaalka kula jiray, ka hor inta aan cafis guud lagu fasixin.